Iipropati ezisetyenziswayo zeoli yeesame
Ixesha lexesha lethu lihlala kwindawo ebaluleke kakhulu ekhitshini. Namhlanje, akunakwenzeka ukuba ucinge ikhitshi ngaphandle kwetyuwa. Enye yexesha elidala, kunye neetyuwa, linokuqwalaselwa njengesityalo sesame (sesame). Ngokulinganayo, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba imbewu yeesame ayiqhelekanga njengenye i-condiments. Nangona uluntu lwazi ngeesame kusukela ngamaxesha amandulo. Kukhankanywe kwinqanaba elidala, ngokuba namhlanje, i-papyrus, echaza izakhiwo ezincedo zemifuno eyahlukeneyo. Imbewu ye-sesame ibhekisela kwimibhalo yabo u-Avicenna, ogama lakhe kwipilisi, sele liba likhaya. Ukongezelela, izakhiwo ezincedo ze-sameyile kunye ne-sesame ngokwazo zaziwa kumayeza e-Yiputa yamandulo kwaye zazisetyenziswa ekude emva kwe-1500 BC ukunyangwa kwezifo ezahlukahlukeneyo.
ISesame yafika kuthi evela eMpuma, apho ithandwa kakhulu. Ngokomzekelo, kwelinye leendulo zamandulo zaseAsiriya ezichaza ngokudaliweyo, kuxelwa ukuba ngaphambi kokudalwa kwehlabathi, oothixo basele iwayini kwi-sesame.
Kwaye yonke ibinzana eyaziwayo "Vula iTzem" evela empuma ye-fairy "Ali Baba kunye nama-Forty Thieves"? Le binzana elithi "Ali Baba" yayisetyenziselwa ukungena emqolombeni, apho ubuncwane bebiwe ngabaphangi. Abaphandi baqaphele ukuba ukukhankanywa kweesame kunye "nokuvulwa" komqolomba kungekhona ngengozi. Inyaniso kukuba xa ukuvuthwa kweepods ze-sesame kuqhutywe nge-crack ephakamileyo kwintsimbi encinci.
Kwakhona, abemi bendawo yakudala yaseBhabhiloni basebenzisa isisame zokupheka, iwayini. Kwaye kunokuba yonke ioli yelanga ye-sunflower isetyenziswe isisame kwiinjongo ezifanayo.
Abaphengululi bezinto zakuqala babecinga ukuba isidlo sesisu sibe ngumthombo wokungafi. Ngokuqinisekileyo, akukho mntu uthatha ngokunyanisekileyo, kodwa, njengoko bethetha, akukho msi ngaphandle komlilo. Iimbewu zeesame zicebile kwiivithamini kunye neemaminerali. Yindlu yokugcina i-vitamin E, i-zinc, i-calcium, i-phosphorus-izinto ezibalulekileyo kumntu ukugcina impilo.
Sisetyenziselwa ukuba umthombo we-calcium ubisi, i-cottage cheese, amaqanda. Okwangoku, umqhubi wasempuma uza kukunika i-calcium yosuku ngalunye (kubantu abangaphezu kwama-30) kwi-100 grams yembewu yesesame. Kunzima ukucinga ukuba esikhundleni seemveliso eziqhelekileyo, uya kuhlaziya imbewu yeesame (apho, ngendlela, yenza i-casinos kakhulu). Ngako oko, abaninzi banokubuyisela imbewu ngeoli yeesame. Ukususela kwindawo enjalo, uza kuzuza kuphela. Emva koko, eqinisweni, ioli yeesame iyigxininiso egcina zonke izakhiwo ezincedo, amaminerali kunye namavithamini. Ukongezelela, ukuba isivuno sembewu ye-same sinokuthi siphumelele, ukuba ingasomisiwe ngaphambili, i-oli ingagcinwa ixesha elide ngaphandle kokulahlekelwa izixhobo zayo ezincedo.
Uphando lwangoku lusebenza ngamaqiniso anomdla. Kuvela ukuba xa usebenzisa i-tablespoon ye-oli ye-sesame engagqibekanga ngosuku, umxholo we-calcium emzimbeni unokwanda ukuya kumaxesha amathathu. Ngenxa yezi mpawu ezincedo zesoyile ye-same, kukho inguqu loo mntu waqala ukuhlakulela isisame ngenxa yeoli.
Iingcali zeCulinary ziqaphela ukuba i-oyile kwiimbewu ze-same ihluke kakuhle kunye ne-shades of nut smell.
Ukuqokelela kweembewu zeesame kuyenziwa ngesandla. Kuphela umsebenzi obunzima kunye nobuchwephesha bokuqokelelwa kwawo akutshintshi kangangeenkulungwane. Ioli yeSesame yindabuko yokutya kwaseMpumalanga. Izakhamuzi zaseJapan, e-China, eIndiya nakwamanye amazwe asempuma zicinga nje ngekhitshi ngaphandle kweoli.
Ngokuhamba kwexesha, imbewu yeesame ayinakrakra. Xa kuveliswa, ubugcisa bendabuko obuxinwa kubanda, buyasetyenziswa ekuveleni kweoli yeoli. Le teknoloji ikuvumela ukuba ulondoloze yonke into eyiluncedo ekhoyo kwimbewu kwaye inikezela ngokugqithiseleka kakhulu kweeminerali kunye namavithamini ngomzimba.
Ukongezelela kumaminerali kunye namavithamini, ioli yeesame iqukethe ezinye izinto ezincedo kunye nezixhobo: i-sesamin, i-phytosterol, i-sesamolin, i-glycerides ye-linoleic, i-oleic, i-palmitic, i-arachine, i-lignoceric kunye ne-acaric acid. Ezi acidi azivelwanga ngumzimba, kodwa ziyimfuneko yokugcina ubomi obuqhelekileyo.
Iyeza zanamhlanje zicebisa ukusetyenziswa kweoli ye-samshe kwi-hypertension, ukuphulwa kwe-lipid metabolism, ukuvuvukala kunye neenkqubo ezidabulayo kumalungu. Emva koko, eli lifutha lidliwayo kwaye linempembelelo enomzimba. Kwakhona, isenzo sokusebenzisa isisame kunye neoli yeesame ekukhuseleni i-osteoporosis sele kuphawulwe. Emva koko, i-sesame, njengoko sasiyibhale ngaphambili, i-phosphorus, i-calcium kunye ne-phytoestrogens. Ezi zinto, eqinisweni, zizinto zokwakha zesithambo somntu, zibaluleke kakhulu kwiinkqubo zokubuyisela amathambo.
Ukongezelela, ioli yeesame iyacetyiswa ngeengxaki zemiphunga: ukukhwehlela owomileyo, i-asthma, ukuphefumula okufutshane.
Iyeza lemveli laseMpumalanga linikeze ioli yeesame kunye neenkcazo ezinjengokuthi "zitshisa", "zinzima". Ngokombono wabo, ioli igalelo ekwakhekeni kwesisundu somzimba, kodwa xa ukukhuluphala kunobangela ukulahleka kwesisindo. Kwakhona, ioli ihlangabezana ngokuthe ngqo nezifo "ezibandayo" (kubanda, kukhohlela).
Amanyango oogqirha bamandulo ayengqiniswanga ngokungalindelekanga ngophando lwangoku nje lwabagqirha baseScandinavia abaye baqinisekisa ukuba i-sesame i-oil isisombululo esihle kakhulu sekhaya esisisigxina se-nasopharynx.
Kwaye ekupheliseni, songeza ukuba impumelelo yakho, impumelelo kunye nentlalo-ntle, kuxhomekeka kakhulu kwiimeko zempilo yakho. Ukuphila okunempilo, ngakumbi unokukwazi ukulawula ukwenza izinto ezincedo, kokubili kunye nomsebenzi.
Ngexesha elifanayo, impilo iquka ezininzi izinto kunye nokuthintela ngakumbi izifo kunezonyango. Indlela yokuphila enempilo, kuquka imidlalo, kunye nokutya okunempilo - isiqinisekiso sokugcina impilo kwindawo efanelekileyo.
Enye yezinto ezinokutya okunempilo kwaye ingaba yioli yeesame. Ukuyongeza ekudleni kwakho, awuyi kuvakalelwa kakhulu ukunyuka kwezinto ezinobunzima, njengezinto ezintsha zokutya owaziyo ixesha elide. Okwangoku, ioli evela kwiimbewu ze-same iza kusebenza ngokukhawuleza ukuqinisa impilo yakho.
Umgcini wakho ongcolisayo ngomhla wokuzalwa
Umbala ophuzi ngaphakathi
Ishokoledi esitrobile kwintonga
Ukutya kwesitatshi: imigaqo kunye nemveliso
Izizathu ezilungileyo kakhulu zovuyo
I-Salmon ene-arugula kwi-lace
UDaria Dontsova kunye neempu
Ihlabathi elimnandi: iwayini laseFransi
I-apple pie ephihliweyo kunye nobusi kunye ne-ginger